အိမ်ခြံမြေ ငှါးရန် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်
အောင်မြေသာဇံ	| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
No.2354 ပေ ၁၁၀ ပတ်လည် ကျယ်ဝန်းပြီး ကျုံး အရှေ့ဘက် အနီးဆုံး နေရာမှ ရှိပါတယ်။RC ၂ ထပ် ခိုင်ခန့် လှပစွာ ပါဝင်ပြီး နှစ်ရှည် ငှားရမ်း ပေးပါမည်။
နန်းဦးလွင် No. 2414 နံကပ် ၂ ထပ် ပေ ၂၅ - ၆၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
နန်းဦးလွင် No. 2415 RC ၂ ထပ် ပေ ၆၀ - ၆၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
mini condo/ နန်းရှေ့ အရှေ့ ပိ်ုင်း No. 2417 တိုက်ခန်း ( မြေညီ အခန်းတွဲများ) ပေ ၂၀ - ၄၀ (တောင်ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
##ငှားမည်## ** ၄သိန်း ** ၂၆/၅၉ လမ်း ဝန်းကျင် No. 2418 တိုက်ခန်း ( မြေညီ အခန်းတွဲများ) ပေ ၂၃ - ၄၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) မဟာဇေယျာဘုံ ၂
##ငှားမည်## ** ၃ သိန်း ** နန်းရှေ့ တောင်ပိုင်း No. 2420 နံကပ် ၁ ထပ် ပေ ၃၀ - ၆၀ (အနောက်ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
##ငှားမည်## ** ၄ သိန်း ** နန်းရှေ့ တောင်ပိုင်း No. 2421 နံကပ် ၂ ထပ် ပေ ၁၀၀- ၈၀ (မြောက်ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့ ( အိမ်ရှင်နှင့် တစ်ဝိုင်းထဲ ရှိပါမည်)
##ငှားမည်## ** ၄ သိန်း ** နန်းရှေ့ No. 2422 RC ၁ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အနောက်ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
##ငှားမည်## ** ၄ သိန်းခွဲ ** နန်းရှေ့ No. 2422 နံကပ် ၂ ထပ် ပေ ၂၅ - ၄၀ (အနောက်ဘက်လှည့် ) နန်းရှေ့
နန်းရှေ့ ကျုံးအနီး၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၃)ခန်း ၊ ဘိုထိုင်အိမ်သာ(၁)လုံး ၊ ပေ၁၁၀ပတ်လည်။ သွားလာရန်လွယ်ကူ စိတ်ပါဝင်စားပါက...